Huawei Watch, smartwatch pụtara ìhè n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile | Akụkọ akụrụngwa
Villamandos | | Nyocha, smartwatch
Obere afọ gara aga, Huawei gosipụtara smartwatch mbụ ya na Mobile World Congress, nke, dị ka anyị niile maara, e mere ya baptism na aha Huawei Watch. Ebe ọ bụ na e gosipụtara ya n’ihu ọha, ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa ka ọ rute ahịa, mana nke ahụ mere ọnwa ole na ole gara aga ma ọ daba n’aka anyị iji nwee ike ịnwale ya, pịa ya ma nyochaa ya maka ihe niile nke gị.
Site na Huawei Watch a, anyị kwesịrị igosi tupu anyị abanye na ihe nyocha ahụ n'onwe ya ọ ga - eme ka onye ọ bụla tinyere ya na nkwojiaka ya n'ịhụnanya, ha ga - apụ n'anya, ma ọ dịkarịa ala ntakịrị, ozugbo ha malitere iji ya ma ghọta oke ike ya na obere ịchịisi ọ na-enye anyị. N'ezie, na nkwojiaka anyị ọ ga-adọta uche nke onye ọ bụla ma nyekwa anyị ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na i chere na oge eruola ịmalite nyocha anyị nke smartwatch a na iji nyochaa isi atụmatụ na nkọwa ya.
1 Nzube, isi okwu nke Huawei Watch a
4 Batrị, akụkụ na-echere maka Huawei Watch a
Nzube, isi okwu nke Huawei Watch a
Ebe ọ bụ na e gosipụtara Huawei Watch na MWC 2015 anyị niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile ejirila otu olu pụta ìhè na imepụta ya dịka otu n'ime ike ya. Ma nke ahụ bụ na iji okirikiri imewe, eriri dị ka elekere ọdịnala na ihe eji eme ihe maka owuwu kwesiri ka ejiri ya rụọ ụlọ elekere ọ bụla dị elu, ha na-enye mmetụ anya na anya. Dịkwa mma.
Ejiri ígwè na sapphire kristal mee ya. Na abụọ ndị a ihe anyị nwere ike ugbua na-aghọta àgwà nke a na ngwaọrụ, karịrị nnọọ ọtụtụ na anyị nwere ike ịhụ na ahịa. N'ezie, nhazi ya na ihe eji eme ya nwere njikọ chiri anya na ọnụahịa nke smartwatch.
Banyere eriri ahụ, Huawei achọghị ịnye eriri roba ma ọ bụ ihe dị oke mma dị ka ọtụtụ ndị nrụpụta ndị ọzọ mere, na na-enye anyị eriri mara mma nke ejiri ihe karịrị ezigbo ihe. Ọzọkwa, ọ bụrụ na eriri ahụ ejikọtara dị ka ọkọlọtọ na ngwaọrụ ahụ edoghị gị anya, anyị nwere ike ịzụta otu mgbe ọ bụla n'ụlọ ahịa ọla ọ bụla ebe ọ bụ na ọ kwekọrọ n'ụdị eriri ọ bụla.
N'ikpeazụ, iji mechie ngalaba imewe, anyị chọrọ ịnye gị akụkụ nke Huawei Watch a, ebe ọ bụ na ọ na-abụkarị ozi nke ọtụtụ mmadụ kwesịrị iche n'echiche etu ọ ga-esi dabara na nkwojiaka. Banyere okirikiri, ọ nwere dayameta nke 42 millimeters na ọkpụrụkpụ nke ngwaọrụ ahụ bụ 11,3 millimeters. Odori ke nkwojiaka, ọ dịkarịa ala na m ikpe, ọ bụ zuru okè n'agbanyeghị nwere a nnọọ obere nkwojiaka.
Ọzọ anyị ga-eme nyocha nke ọma banyere njirimara nke Huawei Watch a. N'ime anyị ga-ahụ ihe nhazi APQ8026, ya na cores anọ 1,2 GHz nke na-akwado 512 MB RAM nke karịrị iji ya mee ihe n'atụghị ụjọ ma na-enye anyị nnukwu arụmọrụ.
Banyere elekere elekere anyị na-ahụ a 1,4-anụ ọhịa 286 dpi AMOLED panel. Ihuenyo a pere mpe karịa nke ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a, ọ bụ ezie na eziokwu ahụ abụrụla ahụmịhe karịa nke ọma ma ọ dịbeghị oge anyị hụrụ ihuenyo a, ihe pere mpe karịa ihe anyị nwere ike ịkpọ nkịtị.
Ọzọkwa na Huawei Watch a, anyị na-ahụ nchekwa dị n'ime nke 4 GB, Njikọ Bluetooth 4.1 na WiFI 802.11 b / g / n. Dị ka ndị ọzọ smartwatches, ọ na-agụnye accelerometer, vibrator na 350 mAh batrị nke, dị ka anyị kwurula na mbụ, dịtụ ntakịrị iji nwee ike iji ngwaọrụ maka ihe karịrị otu ụbọchị.
Anya ndị nlegharị anya ewerela ihe dị ezigbo mkpa mgbe ọ bịara n'ịrụ ọrụ na Huawei Watch abụghị otu. Ekele ya processor na RAM na ebe nchekwa na ezigbo njikarịcha nke gam akporo Wear na-enye ohere ngwa niile na-aza wezuga ma na-enyeghị anyị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe ịma aka mgbe ịmepe ha.
Ọrụ niile anyị nwere ike ikwu pụtara ìhè, ọ bụ ezie na inyocha ntakịrị ihe omimi anyị achọpụtala ụfọdụ igbu oge mgbe ịmepe ntọala ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọ bụla dị oke mkpa ma ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ ga-eche banyere. Ọ gwụla ma ị attentionara ntị nke ọma, dịka anyị na-eme na ngwaọrụ niile, ị nwere ike ọ gaghị achọpụta oge a.
Batrị, akụkụ na-echere maka Huawei Watch a
Batrị nke Huawei Watch a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị njọ na nke Huawei ga-arụ ọrụ n'ọdịnihu. Imirikiti ngwaọrụ nke ụdị a na-enye anyị nnwere onwe dị ala na nke ahụ agaghị ekwe ka anyị jiri smartwatch maka awa 24. N'ihe banyere smartwatch a sitere n'aka onye na-emepụta ihe na China, anyị hụrụ batrị mAh 350 nke karịrị iji ruo na njedebe nke ụbọchị, mana nke ahụ ga-amanye anyị ka anyị na-akwụ ụgwọ ya kwa abalị iji nwee ike iji ya na-enweghị nsogbu nke na-esote ụbọchị.
N'ime ule dị iche iche anyị meworo, anyị jisiri ike na enweghị nsogbu ọ bụla nke Huawei Watch na-eguzogide na-agba ọsọ ụbọchị niile, belụsọ maka oge ole na ole mgbe anyị biliri n'isi ụtụtụ wee gbalịa ịgbatị ọchịchị obodo ahụ ruo ụtụtụ ụtụtụ. Nanị ụzọ iji mee batrị nke smartwatch a gafere 24 awa bụ iwepu ya ma jiri ya dị ka elekere ọdịnala.
Batrị nke Huawei Watch a enweela mma ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ụdị a nke dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla ọ ka ga-emeziwanye ọtụtụ ihe iji nye anyị ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị.
N'akụkụ a, anyị ga-egosipụta chaja ngwaọrụ nke kachasị mma nke anyị mara na ahịa smartwatch. Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyogho anyị na-egosi gị nke chaja, naanị tinye Huawei Watch na ebe a na-akwụ ụgwọ ma hapụ ya ka ọ kwụba ụgwọ. N'ime oge dị mkpirikpi, anyị ga-enwe batrị zuru oke maka ezigbo oge na n'echeghị ogologo oge anyị ga-enwe batrị ụbọchị niile.
Ugbu a Huawei Watch Anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ụlọ ahịa, ma nke anụ ahụ na nke dijitalụ. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị iche nke ukwuu dabere na ebe anyị zụrụ ya. Dịka ọmụmaatụ taa Anyị nwere ike ịzụta ya na Amazon maka ọnụahịa nke euro 299, nke bu ugwo di egwu, ma karie ma oburu na anyi tulee na onu ahia nke smartwatch a bu euro 360.
Enwere ike ịchọta Huawei Watch a na oji, ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha. Nke ikpeazụ bụ ụdị nke anyị nwere ike ịnwale na Actualidad Gadget, ọ bụ ezie na anyị enweela ike ịlele ụdị ndị ọzọ fọdụrụnụ na n'uche nke anyị, o doro anya na ọ mara mma karịa. Huawei nwekwara ọtụtụ eriri ọrụ maka ọrịre, ọ bụ ezie na dịka anyị kwurula, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke eriri dabara na ngwaọrụ a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa ejiriwo m Huawei Watch na nkwojiaka m ma n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na imepụta ya na-eme ka m hụ n'anya dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ọzọ na ọ bara ezigbo uru n'ọtụtụ oge, echere m ụdị ngwaọrụ ndị a ka bụ ngwa dị oke ọnụ maka ịba uru anyị nwere ike inweta.
Ma ọ bụ na n'oge smartwatches na-enye anyị ndị ọrụ ole na ole maka ndị ọrụ, maka ọnụahịa ha nwere, na n'ọnọdụ m, ihe niile dị ntakịrị karịa mgbagwoju anya ejirila Huawei Watch na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ iOS. Agwawo m ya ọtụtụ narị ugboro maka ndị enyi na ezinụlọ, yana mmadụ ole na ole na weebụsaịtị a, mana ruo mgbe elele anya anaghị enye anyị nnwere onwe ka ukwuu, opekata mpe ụbọchị 3 ma ọ bụ 4, maka ọtụtụ nhọrọ ha na-enye anyị ma ọ bụ maka ihe ịtụnanya. imewe agaghị akwụsị emeri m ma yie ihe bara uru. M na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa mkpanaka m kwa ụbọchị ma n'eziokwu, anaghị m njikere maka okpokoro m jupụta na ihe kwa abalị na agụụ.
Ahapu uche nkem, Nke a Huawei Watch bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na smartwatch kachasị mma nke m gbalịrị ịlụ. Onye na-enwe mmasị ma kwenyesie ike site na nhọrọ na nnwere onwe nke ngwaọrụ ndị a na-enye, na-enweghị mgbagha na ị na-eji ezigbo ego euro na ngwaọrụ a n'aka ndị ọrụ China bụ nhọrọ amamihe. Ọ bụrụ na, dịka enweghị m ike kwenye na ọrụ, ma ọ bụ obodo kwụ ọtọ na ọbụnadị elele ọdịnala, anaghị azụta Huawei Watch a ma ọ bụ smartwatch ọzọ n'ihi na ọ ga-esiri ya ike ime ka ị kwenye, ọ bụ ezie na ị maghị.
Kedu ihe ị chere gbasara Huawei Watch a?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Huawei Watch, smartwatch pụtara ìhè n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla